Current Affairs | Myanma Radio and Television
Farmer Channel Schedule
Hluttaw Channel Schedule
Broadcasting Law (Amendment No. 19) (21-6-2018)
Broadcasting Law (Rules ‌and Regulations)
MRTV Broadcasting Guidelines
Mpedia- Knowledge Book for MRTV News Reporting
Fundamental Code of Broadcasting Ethics and Code of Conduct
Radio Song Request Form
Indoor Shooting Request Form
Outdoor Shooting Request Form
Myanma Radio and Television
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် KNU/ KNLA (PC) မှ ဥက္ကဋ္ဌ စောထော့လေး ဦးဆောင်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား တွေ့ဆုံ၍ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေး
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဌာနခွဲစာရေးများ အင်္ဂလိပ်စာနှင့်နိုင်ငံခြားရေးရာကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်း(၄/၂၀၂၂)ဖွင့်ပွဲတက်ရောက်
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်အုန်း မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားတွင် မကြာမီထုတ် လွှင့်ပြသမည့် (၃၈)ဖြာ မင်္ဂလာအစီစဉ်အား ကြိုတင် ကြည့်ရှု အားပေး
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား MRTV Media Worldwide Mobile Satellite Data Application Service, MRTV App & Web ဖွင့်လှစ်ခြင်းအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်း မော်လမြိုင်တပ်နယ်နှင့် ထားဝယ်တပ်နယ်မှ အရာရှိ စစ်သည် မိသားစုဝင်များအား တွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြား
ငွေကြေးအများအပြားရင်းနှီးပြီး ပစ္စည်းရောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်နေကြသူတွေကတော့ တစ်သောင်းတန် အစား အခြားငွေစက္ကူပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာတွေရှိသလို ငွေစက္ကူအတုအစစ်သေချာရွေး နေဖို့မျှော်လင့်နေကြတဲ့ သူတွေလဲရှိနေပါတယ်။
ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးသိန်းသန်းဦးနဲ့ Financial Consultant ဦးကျော်မျိုးထွန်းတို့မှ MRTV ရဲ့ မျက်မှောက်ရေးရာအဖြာဖြာအစီအစဉ်မှာ ဆွေးနွေးထားကြပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ (3.1.19) ကြာသပတေးနေ့. ညနေ(6:30) နဲ့ (4.1.19) သောကြာနေ့မနက် (8:30) တို့မှာ MRTV ရဲ့ မျက်မှောက်ရေးရာအဖြာဖြာအစီအစဉ်မှာထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းရင်းဆေးကောင်စီ ဥပဒေကြမ်းပါ တိုင်းရင်းဆေးဆရာအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်အငြင်းပွားနေလား
မကြာသေးမီက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းဆေးကောင်စီ ဥပဒေကြမ်းပါ ပုဒ်မ (၁၅)စ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းရင်းဆေးလောကမှာ ဝိဝါဒကွဲပြားမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီပုဒ်မမှာတော့တိုင်းရင်းဆေးဆရာအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခြင်း တ.ဆ လက်မှတ် ထုတ်ပေးရန် အရည်အချင်းကို တိုင်းရင်းဆေးကောင်စီကသာ သတ်မှတ်ရန်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ သြသုတိုင်းရင်းဆေးဝါးကုသရေးနှင့်ထုတ်လုပ်ရေး တိုင်းရင်းဆေးသမားတော်ကြီး ဦးရန်အောင်နဲ့ တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဟောင်းများ အသင်းမှ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးဟိန်းစိုးကျော်တို့က မျက်မှောက်ရေးရာအဖြာဖြာမှာ ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ (3.1.19) ကြာသပတေးနေ့. ညနေ(6:30) နဲ့ (4.1.19) သောကြာနေ့မနက် (8:30) တို့မှာ MRTV ရဲ့ မျက်မှောက်ရေးရာအဖြာဖြာအစီအစဉ်မှ ာထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မျက်မှောက်ရေးရာအဖြာဖြာ "အပူဒဏ်လွန်ကဲတဲ့အန္တရာယ်အပြင် ကူးစက်ဖြစ်ပွ...
Current Affairs May 12, 2022
လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်း...
Current Affairs May 10, 2022
မျက်မှောက်ရေးရာအဖြာဖြာ (လိုင်စင်သစ်လျှောက်ထားရမည့် ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသေ...
Current Affairs May 05, 2022
မျက်မှောက်ရေးရာအဖြာဖြာ "နိုင်ငံအတွက်အရေးပါတဲ့ ရေထွက်သယံဇာတတွေကို...
Current Affairs April 29, 2022
တရားမဝင်သစ်မျိုးစုံ၊ ဆိုင်ကယ်အပိုပစ္စည်း လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများနှင့် မေ...
Current Affairs April 27, 2022
မျက်မှောက်ရေးရာအဖြာဖြာ "ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သက်ကြီးပိုင်းတွင် ဖြစ်လေ...
Current Affairs April 26, 2022
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစိုးသိန်း ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ...
Current Affairs April 22, 2022
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစိုးသိန်း ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် ပြည်ပဆိုက်ရောက်နှင့် ထွက်ခွာ အဆောက်အဦ တိုးချဲ့တည်‌ဆောက်နေမှု...
မျက်မှောက်ရေးရာအဖြာဖြာ "ဓာတ်အားအလေအလွင့်မရှိစေဖို့နှင့် ဓာတ်အားခန...
Current Affairs April 08, 2022
မျက်မှောက်ရေးရာ အဖြာဖြာအစီအစဉ် “ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိ...
Current Affairs March 30, 2022
မျက်မှောက်ရေးရာ အဖြာဖြာအစီအစဉ် "ပြည်တွင်းစားသုံးဆီ လုံလောက်မှုရှိ...
Current Affairs March 27, 2022